Ukuguqula ukubonakala kunye nabafowunelwa beakhawunti yakho? Twitter ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Kwi-Twitter awuyi kufumana kuphela umthombo ongapheliyo weendaba kunye nolwazi olusuka kwizigidi zeakhawunti, uya kuba nakho ukwenza umxholo wakho nangaliphi na ixesha. Kuxhomekeke kwiinjongo zakho kwinethiwekhi, iakhawunti yakho inokuba yeyokuthengisa okanye yokonwabisa okulula.
IiTweets, njengoko upapasho lweli qonga lusaziwa, zisebenza ukunxibelelana nezinto ozifunayo ngoonobumba abangama-280 kuphela. Ungabandakanya isicatshulwa ngoonobumba abakhulu nabancinci, iisimboli, kunye nee-emojis. Imifanekiso, i-GIFS kunye neevidiyo. Ngokwenza ezi akhawunti, uthatha isigqibo sokuba yimfihlo kwezithuba zakho.
Ewe unokwenza iiakhawunti ngamanqanaba ahlukeneyo okubonakala. Oku kubonakala kubandakanya ukuba zombini iprofayile kunye nomxholo wakho ziyafumaneka kubasebenzisi be-Twitter. Ukubonakala kweakhawunti kubaluleke kakhulu kubasebenzisi, ngakumbi xa ufuna ukugcina imfihlo yeakhawunti yakho.
Ukubonakala okanye hayi kwi-Twitter?
Ukubonakala onayo kwiqonga kuya kuxhomekeka kwinto oyifunayo ngenene ngeakhawunti yakho. Xa uqala njengomsebenzisi omtsha kwinethiwekhi yoluntu kwaye ufuna ukwandisa ifuthe lakho eqongeni, kuya kufuneka wandise ukubonakala kwakho ngokusebenzisa ezinye iindlela, ngakumbi kwimikhankaso yentengiso yedijithali.
Uyiphucula njani i-biography yakho, ukufaka amagama aphambili okanye i-URL. Yila iprofayili enomdla kunye nemifanekiso ebhalwe ephepheni enomfanekiso wokuphelisa umkhankaso okanye ilogo. Kwelinye icala, kufuneka wenze ngcono iiTweets zakho, udibanise ibhlog yakho okanye iwebhusayithi, uthathe inxaxheba kwiincoko, kunye nokuncamathisela izinto zonxibelelwano ngaphandle kweintanethi.
Nangona kunjalo, ngenye indlela kwaye ufuna ukucinezela ukubonakala kweakhawunti yakho kangangoko kunokwenzeka, Ungasebenzisa amanyathelo endiza kuwachaza apha ngezantsi.
Fikelela kwiakhawunti yakho I-Twittter enegama lomsebenzisi kunye nephasiwedi.
Ngenisa "Useto nemfihlo". Eli candelo linokufunyanwa kwifoto yeprofayile yeakhawunti yakho kwisicelo okanye ngokufaka "Iinketho ezininzi".
Ngaphakathi kolu khetho, kufuneka ufake "Ubumfihlo nokhuseleko". Nje ukuba ungene, kufuneka ubeke icandelo "Umsebenzi wakho kuTwitter", oya kuthi wahlulwe ube ngamacandelo amathandathu amanye, elokugqibela kuwo "ukuBonakala kunye nabafowunelwa".
Xa ungena koku, uya kufumana amacandelo amabini aphambili: "Ukubonakala" kunye "nabafowunelwa".
Ngaphakathi ukubonakala kuya kuvela:
Ithuba lokuvumela abantu besithathu ukuba bakufumane kwi-Twitter nge Imeyili
Kwelinye icala, uya kuba nokuvumela abantu besithathu ukuba bakufumane kwi-Twitter ngenombolo yakho ye-imeyile. umnxeba.
Zombini ezi zikhetho ziya kuba nebhokisi yazo efanelekileyo ukuze unike imvume ezihambelanayo
Ngaphakathi abafowunelwa baya kuvela:
Ukukwazi ukulawula bonke abafowunelwa abangenise kwifowuni yakho. Ngabo bonke abafowunelwa, i-Twitter ikwacwangcisa amava akho eqongeni, njengeakhawunti oza kuyilandela.
Xa ufaka olu khetho, uya kufumana ngokomgaqo phezulu "Cima bonke abafowunelwa ”, ukuba ufuna ukuzisusa ngokupheleleyo. Nangona le nkqubo ikuxwayisa ukuba le nkqubo ingathatha ixesha.
Emazantsi uya kufumana bonke abafowunelwa olayishe kubo Uluhlu lwemowudi.
1 Ukubonakala okanye hayi kwi-Twitter?
2 Amanyathelo oku:
3 Ngaphakathi ukubonakala kuya kuvela:
4 Ngaphakathi abafowunelwa baya kuvela: